RW ku xigeenka Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda oo logu doortay Muqdisho | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta RW ku xigeenka Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda oo logu...
RW ku xigeenka Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda oo logu doortay Muqdisho
Doorashada Xildhibaanada Aqalka Hoose ee Gobollada Wqqooyi ayaa maanta ka billaabay Muqdisho.
Kursgii ugu horeeyay ee Beelaha gobolada Waqooyi waxaa ku guuleystay Ra’iisulwasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte, oo helay codad gaaray 47 cod, halka Axmed Ismaaciil Xuseen oo la tartamayay uu helay 4 cod.
Doorashada xildhibaanada ka imaanaya degaanada maamulka Somaliland ayaa lagu waddaa in ay sii socota maalmaha Soo socda tan iyo inta laga dhameystirayo xildhibaanada ka imaanaya degaanada maamulka Somaliland.
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, C/raxmaan Ducaale Bayle, ayaa ku guuleystay kursigii labaad ee Xubnaha Aqalka Hoose ee Beelaha Gobollada Waqooyi ee Soomaaliya.
C/raxmaan Beyle, oo la Tartamayay C/llaahi Xaashi Abiib ayaa ku guuleystay 48-cod, halka Abiib, uu helay laba cod oo keliya, iyadoo codna uu xumaaday, sida ay ku dhawaaqeen guddiga Doorahada.
Previous articleLabo xildhibaan oo lagu doortay Cadaado
Next articleMadaxweynaha oo Kismaayo kula kulmay Xildhibaanada Labada Aqal ee Jubbaland ” Sawirro”